दुई चम्चा बेसनमा मिसाएर लगाउनुहोस् यो चिज, धाउनुपर्दैन कुनै पनि पार्लर !! - Nepali in Australia
दुई चम्चा बेसनमा मिसाएर लगाउनुहोस् यो चिज, धाउनुपर्दैन कुनै पनि पार्लर !!
June 3, 2021 EditorLeaveaComment on दुई चम्चा बेसनमा मिसाएर लगाउनुहोस् यो चिज, धाउनुपर्दैन कुनै पनि पार्लर !!
अनुहार चम्काउन सौन्दर्य प्रशाधनमा मानिसहरु हजारौं खर्च गर्छन् । व्युटी पार्लर धाउँछन् । तर कतिपय यस्ता सामाग्रीले कुरुप बनाएका थुप्रै उदाहरण पनि छन्।
९) अनुहारमा घिउकुमारीको रसले मालिस गर्दा अनुहारमा चमक आउँछ र चाउरीपन पनि हराउँछ ।
१०) सुन्तलाको बोक्रलाई घाममा सुकाएर पिसेको धुलोमा कागतीको रस मिसाएर लेप बनाउने। यसलाई फेसवासको रुपमा प्रयोग गर्ने ।
११) फिटकिरीको प्रयोग हामी निम्न समस्यामा गर्न सक्छौः अनुहार तथा शरीरको कुनै पनि भागमा छालामा देखा परेका दागधब्बा हटाउनको लागि फिटकिरीको प्रयोग गर्न सक्छौ ।
त्यसको लागि दाग भएको ठाउँमा फिटकिरीले नियमित मसाज गर्नुपर्छ । केही समय मसाज गरेपछि चिसो पानीले पखाल्नुस् तपाईको छालामा रहेको दाग विस्तारै हराउँदै जान्छ । त्यस्तै, यदि तपाईको शरीरमा चिलाउने, गन्हाउने जस्ता समस्या आएका छन् भने फिटकिरीले नियमित नुहाउनुपर्छ । यसले पसिनाको गन्ध कम गर्न मद्दत गर्छ ।